ILaxmi Farm Villa: Ukuhlala kwiFama
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguAvinash
Onke amagumbi axhotyiswe ngokuhlala ngaphandle okanye ibalcony ejonge kubomi obuhle belali yaseKoovode, phakathi kweehektare ezi-3 zomhlaba apho kulinywa khona imifuno ephilayo.
I-Koovode ikwathathwa njengenye yezona dolophana ziluhlaza kwaye zingakhange zichukunyiswe kwisithili nangona iphakathi kuzo zonke iindawo ezidumileyo zabakhenkethi eKannur. Iindwendwe ziqinisekiswa ukuba ziphumle, zizolile & nomoya opholileyo wasekhaya ngemali abayihlawulayo xa kuthelekiswa nezinye iipropathi kwesi sixeko.
Amagumbi abanzi kakhulu, angaphakathi afakwe kakuhle ngomgangatho weplanga, iibhedi zobukhulu benkosi, ilinen, iwadilophu, iitafile zokufunda, i-iron bob / itafile, i-air conditioning, igumbi lokuhlambela labucala (elifakelwe izindlu zangasese zasimahla), isifudumezi samanzi njl.njl.
I-villa yefama ye-LAXMI inikeza indawo eninzi yokudlala yabantwana; iindwendwe ziya kuba nexesha elimnandi kude nokungcola kobomi besixeko "ixesha lokuphumla kwidolophana, lishiywe kwiingcamango zakho". Imisebenzi efana nokukhenketha kwilali, ukudlala ibhola kunye nabantwana basekhaya, i-badminton, ukuqubha kwiponti yetempile iya kuba yibhonasi emnandi. Iindwendwe zingaqesha imoto/ibhayisekile ukujonga indawo
Abantu bale lali banobubele kwaye banenkathalo. Ukuba uthatha isigqibo sokuhambahamba uya kumangaliswa luthando oluboniswa ngabantu kunye nolonwabo olukhulu abaluthathayo ekuboniseni ilali yabo kunye nobuhle bayo. Ngeenyawo, yonke into ikufuphi; iivenkile zegrosari, iivenkile zeti, iitempile, imilambo, ibala le-paddy, iifama njl.njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Avinash